July 17, 2021 Chima Godswill
Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa liis dhameystiran oo ah jaamacadaha injineernimada ugu sareysa Ontario Canada. Dhowr jaamacadood oo adduunka ah ayaa bixiya barnaamijyo injineernimo ah oo ardayda ku qalabeeya xirfado farsamo oo casri ah oo ay u baahan yihiin xoogsatada iyo Kanada tan ugama tagin tan.
Darajooyinka laga helo hay'adahan ayaa si weyn looga aqoonsan yahay adduunka oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, iskuulada injineernimada waxaa aqoonsan Guddiga Aqoonsiga ee Injineeriyada iyo Teknolojiyada (ABET) waxayna ardayda siiyaan aqoon iyo xirfado ay u baahan yihiin tikniyoolajiyadda casriga ah iyo warshadaha.
Sidaa darteed, qodobkaan wuxuu ku siin doonaa faahfaahinta jaamacadaha injineernimada ugu sareysa ee Ontario Canada iyo sidoo kale sababaha aad ku imaaneyso Kanada.
1 Maxaad ugu barataa injineernimada Kanada?
2 Jaamacadaha ugu sareeya injineernimada Ontario Canada
2.1 Jaamacadda Toronto
2.2 Jaamacadda Windsor
2.3 Jaamacadda Carleton
2.4 Jaamacadda McMaster
2.5 Jaamacadda Ryerson
2.6 Jaamacadda Ontario ee Machadka Teknolojiyada
2.7 Jaamacadda Western Ontario
2.8 College of Military Military ee Canada
2.9 Jaamacadda Queen
2.10 Jaamacadda Guelph
2.11 Jaamacadda Ottawa
2.12 Jaamacadda Waterloo
2.13 Jaamacadda Laurentian ee Sudbury
2.14 University of Lakehead
2.15 Jaamacadda York
2.17 Talo soo jeedin
Maxaad ugu barataa injineernimada Kanada?
Waxaa jira sababo badan oo ardeydu u doortaan Ontario Canada inay tahay meesha ugu doorbidsan barnaamijyada injineernimada adduunka. Aynu eegno sababaha hoose.
Darajooyinka injineernimada ee hay'adaha Ontario Canada ay bixiyaan ayaa laga aqoonsan yahay adduunka oo idil. Dugsiyadan injineernimada waxaa laga aqoonsan yahay Guddiga Aqoonsiga ee injineernimada iyo teknolojiyadda (ABET). Ardayda ka qalin jabisay machadyadan waxaa loo tababaray inay kasbadaan aqoonta iyo xirfadaha looga baahan yahay dhammaan qeybaha tikniyoolajiyadda injineernimada.
Cilmi baaris ayaa muujisay in Kanada ay ka mid tahay wadamada ugu nabada badan adduunka. Waxay sidoo kale leedahay fursado shaqo oo badan oo loogu talagalay ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba. Ka qalin jabinta injineernimada Ontario Canada, waxaa jira warshado badan oo u baahan doona khibradaada meelo dhowr ah.
Adoo wax ku baranaya Hay'adaha Canada, waxaad fursad u heli doontaa inaad ku dhisto xiriiro xirfadlayaal ah khabiiro dhinaca injineernimada ah. Intooda badan xiriiradaani waxay ka yimaadaan shabakada qalin jabiyaasha ee hay'adaha waxayna markaa ka caawiyaan ardayda cusub ee ka qalin jabisay hay'adaha inay helaan shaqooyin mushahar sare leh.
Jaamacadaha ugu sareeya injineernimada Ontario Canada
Liiskan jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan ee Ontario Canada waxaa lagu aruuriyay iyadoo lagu saleynayo tirada barnaamijyada la bixiyo, darajooyinka jaamacadaha, aqoonsiga, iyo heerka aqbalaadda.
Sidaa darteed, jaamacadaha ugu sareeya injineernimada Ontario Canada waxaa ka mid ah:
Jaamacadda Ontario ee Machadka Teknolojiyada
Jaamacadda Western Ontario
College of Military Military ee Canada
Jaamacadda Laurentian ee Sudbury
University of Lakehead
The Jaamacadda Toronto (U of T ama UToronto) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku leh magaalada Toronto, Ontario, Canada oo loo aasaasay inay noqoto King's College sanadkii 1827. Waa jaamacada ugu da'da weyn Ontario.
Kulliyadda injineernimada ee Jaamacadda Toronto waxay bixisaa barnaamijyo bachelor ah, mastar, iyo shahaadada jaamacadeed ah oo ku saabsan dhowr injineernimo.
Hoos waxaa ku yaal waaxyada U of T ee Kulliyadda injineernimada:
Injineerinka korantada & kombuyuutarka
Barnaamijyada lagu bixiyo heerka koowaad waxay ardayda siin doonaan 600 saacadood oo khibrad wax ku ool ah. Tani waxay ka caawin doontaa iyaga inay dhisaan khibrada xirfadeed ee looga baahan yahay goobta.
Dhanka kale, tani waxay u baahan doontaa ardayda inay ka shaqeeyaan warshad si ay u sameeyaan cilmi baaris. Markay si guul leh u dhammaystiraan Barnaamijka Iskaashatada Sannad-Khibradeed iyo qalinjabinta, ardayda waxaa la siiyaa Bachelor-ka Sayniska Sayniska ee Sayniska injineernimada (BASc in EngSci).
The Jaamacadda Windsor (U of Windsor ama UWindsor) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku taal Windsor, Ontario oo la aasaasay 1857.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada ugu sareysa Ontario, UWindsor's Kulliyadda injineernimada waxay wadar ahaan wadataa 1,420 ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo 1,766 ardayda qalin jabisay. Waxay bixisaa barnaamijyo injineernimo tayo sare leh oo horumariya ardaydeeda si ay u noqdaan xirfadlayaal xallin kara dhibaatooyinka farsamo ee ka jira deegaanka adduunka.
Heerka koowaad ee jaamacadeed, daraasadaha ayaa dabooli doona xisaabta, aasaaska sayniska, iyo koorsooyinka injineernimada. Waxbarashadu waxay xooga saari doontaa falanqaynta, isku-dhafka, iyo qaabeynta. Barnaamijyada jaamacadeed ee la heli karo waxaa ka mid ah:
Qalabka korontada iyo kombiyuutarka
Injineernimada Warshadaha oo ay la socdaan ilmo yar oo Maamulka Ganacsiga ah
Injineernimada farsamada leh ikhtiyaarka agabka
Injineeriyada farsamada leh oo leh ikhtiyaarka Aerospace
Injineernimada farsamada leh ikhtiyaarka gawaarida
Injineernimada farsamada leh ikhtiyaar deegaan
Intaa waxaa dheer, kulliyadda injineernimada waxay bixisaa barnaamijyo mastar ah iyo shahaadada jaamacadeed ee injineernimada.
Jaamacadda Carleton waa jaamacad dawladeed oo ku taal Ottawa, Ontario, Canada oo loo aasaasay inay tahay kulleej gaar loo leeyahay 1942.
Iskuulku wuxuu u dhacaa inuu noqdo mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan Ontario barnaamijyadiisa dhameystiran ee ardayda ugu diyaarinaya abaalmarinta shaqooyinka adduunka dhabta ah. Ardaydu waxay ku qalabeysan yihiin aqoonta iyo xirfadaha aadka loogu baahan yahay bulshada maanta dhaqsaha badan ee xawaaraha ku socda, teknolojiyadduna ku shaqeyso.
Kulliyadda Injineerinka iyo Naqshadeynta ee Jaamacadda Carleton waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad ah oo lagu horumariyo ardayda iyada oo loo marayo iskaashi wada shaqeyn iyo shaqo goob taas oo siineysa iyaga khibrad dhab ah oo adduunka ah oo ay la leeyihiin warshadaha.
Intaa waxaa sii dheer, barnaamijyada injineernimada ee Jaamacadda Carleton waxaa si buuxda u aqoonsan Guddiga Sare ee Aqoonsiga injineernimada Kanada ee Injineerrada Kanada.
Dhinaca kale, Kulliyadda Injineerinka iyo Naqshadeynta ee Jaamacadda Carleton waxay bixisaa barnaamijyo qalin-jabineed oo kala duwan oo injineernimo ah, naqshadeynta warshadaha, dhismaha, iyo macluumaadka tiknoolajiyadda. Tani waxay ardayda siineysaa xulashada koorsooyinka ku saleysan ama barnaamijyada sayniska ee ku saleysan cilmi baarista.
Aasaasay sannadkii 1887, Jaamacadda McMaster waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku taal Hamilton, Ontario, Canada.
Kulliyadda Injineeriyadda ee Jaamacadda McMaster waxay ka kooban tahay waaxyaha soo socda:
Computing iyo Software
Sayniska Sayniska iyo injineernimada
Injineernimada & Maareynta
Injineernimada & Bulshada
Isku-dhafan injineernimada injineernimada & sayniska caafimaadka (IBIOMED)
W Booth Dugsiga Tababbarka injineernimada iyo Teknolojiyada
Barnaamijyada ay bixiso kuliyadu waxaa ka mid ah bachelor-ka, master-ka, iyo darajooyinka dhakhtarnimo dhowr maadooyin injineernimo ah. Barnaamijkeeda injineernimada shanta sano ah wuxuu ardayda siiyaa khibrad injineernimo xirfadeed oo ay weheliso aagag, sida cilmiga caafimaadka, ganacsiga, iyo waayo-aragnimada jaamacadeed ee ballaaran.
Kulliyadda injineernimada McMaster waxay ka dhigeysaa iskuulka mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan Ontario Canada.
Jaamacadda Ryerson (Ryerson ama RyeU) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku leh Ontario, Kanada oo la aasaasay 1948.
RyeU's Kulliyadda Injineerinka iyo Sayniska Naqshadeynta waxay bixisaa barnaamijyo badan oo injineernimo ah oo dhowr maadooyin ah taas oo ka dhigaysa hay'adda mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada ugu sareysa Ontario.
Dhanka kale, Kulliyadda Injineerinka iyo Sayniska Naqshadda waxay bixisaa sagaal digrii oo bachelor ah, toban sayid, toddobo barnaamij oo dhakhtar ah, iyo laba diblooma oo saynisyahanno ah ee injineernimada. Kulliyaddu waxay kaloo bixisaa dhowr koorso waxbarasho oo sii socota iyo shahaadooyin injineernimada.
Barnaamijka injineernimada Ryerson ayaa lagu qiimeeyay # 5 Kanada dhexdeeda saamaynta xigashooyinka injineernimada. Intaa waxaa sii dheer, qalin jabiyayaasheeda waxay leeyihiin 85% heerka shaqaalaynta 6 bilood gudahood markay dhameeyaan waxbarashadooda.
Jaamacadda Ontario Institute of Technology (Ontario Tech University ama Ontario Tech) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku leh Oshawa, Ontario, Canada.
Kulliyadda injineernimada iyo sayniska la adeegsaday (FEAS) ee Ontario Tech waxay ardayda siisaa barnaamijyo tayo sare leh oo casri ah iyo waliba cilmi baaris u diyaarin doonta inay noqdaan xirfadlayaal wax soo saar leh iyo hogaamiyaal berri.
Si la mid ah, FEAS waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad ee injineernimada Automotive iyo Mechatronics, koronto, injineernimada kombiyuutarka iyo softiweerka, iyo injineernimada makaanikada & waxsoosaarka.
Ontario Tech, oo caan ku ah barnaamijyadeeda injineernimada ugu sarreysa, ayaa ku jirta kaalinta 3aad injineernimada Ontario. Dunida Tacliinta Sare ee 2020 ee Jaamacadaha Adduunka waxay kuxirantahay Ontario Tech 801-900 adduunka oo dhan. Intaa waxaa dheer, Warbixinta Mareykanka & Warbixinta Adduunka waxay ku xustay Ontario Tech # 1098 qiimeynteeda 2021. Marka, Ontario Tech waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu sareeya injineernimada Ontario Canada.
Jaamacadda Western Ontario (UWO ama Western University ama Western) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku taal London, Ontario, Canada oo la aasaasay 1878.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan Ontario, UWO waxay bixisaa waxbarashada injineernimada taasoo horseedaysa abaalmarinta bachelor-ka, qalin-jabinta, iyo shahaadada postdoctoral ee noocyo badan oo cilmiga injineernimada ah.
Waaxyaha hoos yimaada UWO ee Kulliyadda Injineerinka waxaa ka mid ah injineernimada kiimikada, Injineernimada, Injineernimada korontada, injineernimada isku dhafan, injineernimada farsamada, injineernimada mechatronic, iyo injineernimada softiweerka.
Kuliyada Milatariga ee Boqortooyada Kanada (RMC) waa kuliyada militariga ee ciidamada qalabka sida ee Canada waxaana la aasaasay sanadkii 1876. Waa jaamacad siisa shahaadooyin saraakiisha militariga ee tababarka.
RMC's Kulliyadda injineernimada waxay siisaa saraakiisha aqoonta sare ee injineernimada saraakiisha si ay ugu dhisaan xirfad mihnadeed qaybaha kala duwan ee injineernimada ee Ciidamada Kanada. Shaqada koorsadu badanaa waa isku dhafka koorsooyinka injineernimada oo leh koorsooyin ballaadhinaya aqoonta aadanaha.
Kulliyadda injineernimada ee RMC waxay bixisaa lix barnaamij oo injineernimo ah oo ay ka mid yihiin injineernimada kiimikada, injineernimada madaniga ah, injineernimada kombiyuutarka, injineernimada korontada, injineernimada hawada, iyo injineernimada makaanikada. Barnaamijyadan waxaa lagu bixiyaa labadaba luqadda Ingiriisiga iyo Faransiis.
Barnaamijyada injineernimada ee ay bixiso Kuliyadda Milatariga ee Boqortooyada Kanada waa la aqoonsan yahay Guddiga Aqoonsiga Injineerrada Kanada.
Jaamacadda Queen (Queen's University ama Queen's) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku taal Kingston, Ontario, Canada oo la aasaasay sanadkii 1841.
Kulliyadda injineernimada iyo sayniska la adeegsaday ee Queen's waxay ku bixisaa kambaska iyo barnaamijyada internetka ee injineernimada. Barnaamijyada la bixiyo waxay horseed u yihiin abaalmarinta shahaadada koowaad iyo heerka qalin-jabinta.
Dhanka kale, barnaamijyada injineernimada waxaa ka mid ah kiimikada, madaniga, korontada, makaanikada, kombiyuutarka, macdanta, iyo Mechatronics & Robotics Engineering. Jaamacaddu waxay kaloo bixisaa barnaamijyo sayniska injineernimada ah sida injineernimada kiimikada, injineernimada injineernimada, injineernimada juqraafi, iyo injineernimada & xisaabta.
Jaamacadda Queen ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn uguna wanaagsan injineernimada Ontario.
The Jaamacadda Guelph (U of G) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku leh Guelph, Ontario, Canada oo la aasaasay 1964.
U of G's School of Engineering wuxuu bixiyaa barnaamijyo injineernimada hormood ah oo diiradda saaraya qaabeynta, codsiga, iyo hal-abuurnimada. Barnaamijyadani waxay ardayda siiyaan xirfado iyo tababar gacmeed oo ka dhigaya inay noqdaan kuwo xiiso leh, caqli badan, hal-abuur leh, oo hal-abuurnimo leh. Tani waxay ka dhigeysaa Jaamacadda Guelph mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan Ontario.
Waaxyaha ka hooseeya Iskuulka Injineerinka waxaa ka mid ah Injineeriyada Beeraha, Injineeriyada bayoolojiga, Injineeriyada Biomedical, Injineeriyada Kumbuyuutarka, Injineeriyada Deegaanka, Nidaamka Injineerinka & Kombuyuutarada, Injineeriyada Cuntada, Injineernimada farsamada, iyo Injineernimada Kheyraadka Biyaha. Waaxyadan waxaa aqoonsan Guddiga Aqoonsiga injineernimada Kanada (CEAB).
The Jaamacadda Ottawa (uOttawa ama U of O) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo laba luqoodle ah ku leh Ottawa, Ontario, Canada oo la aasaasay sanadkii 1848.
Kulliyadda Injineeriyada ee Ottawa waxay bixisaa dhowr shahaadooyin jaamacadeed, qalinjabiyey, iyo barnaamijyo khadka tooska ah ah oo ku saabsan maadooyin kala duwan oo injineernimo ah. Barnaamijyada la bixiyay waxaa ka mid ah injineernimada farsamada, injineernimada madaniga ah, injineernimada softiweerka, sayniska kombiyuutarka, injineernimada farsamada biomedical, injineernimada kiimikada, bayotechnoolajiyadda, fisikiska & injineernimada korontada, iyo sayniska xogta.
Dhanka kale, barnaamijyadani waxay ka caawiyaan ardayda inay dhisaan xirfadaha iyo aqoonta si ay u noqdaan hal abuur iyo xirfadlayaal hal abuur leh oo ku saabsan dhinacyada injineernimada.
The Jaamacadda Waterloo (Waterloo, UW, ama UWaterloo) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ah oo ku taal Waterloo, Ontario, Canada oo la aasaasay 1959. Xarunteeda ugu weyni waa Waterloo.
Machadka waxaa loo yaqaanaa inuu yahay iskuulka ugu weyn ee injineernimada Kanada halkaas oo ka dhigaya mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan Ontario. Kulliyadeeda injineernimada waxay bixisaa barnaamijyada bachelor-ka, masters-ka, iyo shahaadada dhakhaatiirta oo leh noocyo badan oo cilmiga injineernimada ah.
Barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadeed ee la bixiyo waa 100% wada-shaqeyn. Kulliyadda injineernimada ee Waterloo waxay ka kooban tahay
Waaxda injineernimada kiimikada
Waaxda madaniga & injineernimada deegaanka
Waaxda injineernimada korontada & kombiyuutarka
Waaxda Sayniska Maamulka
Waaxda injineernimada makaanikada & Mechatronics
Waaxda Naqshadeynta injineernimada
Iskuulka Conrad ee Ganacsiga iyo Ganacsiga
Jaamacadda Laurentian waa jaamacad dadweyne oo laba-luuqadle ah oo kuyaala Greater Sudbury, Ontario, Canada oo la aasaasay 1960.
Barnaamijka injineernimada ee Jaamacadda Laurentian ee Sudbury waxaa bixiya Iskuulka Bharti ee Injineerinka. Ardayda waxaa lasiiyaa injineernimada kiimikada, injineernimada makaanikada, iyo injineernimada macdanta taasoo horseedaysa abaalmarinta shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo mastarka.
University of Lakehead (Lakehead U ama LU) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne ku leh Ontario, Canada oo la aasaasay 1946. Waxay xarumo ku leedahay Thunder Bay iyo Orillia.
Lakehead kulliyadeeda injineernimada waxay bixisaa diblooma cilmiga teknolojiyada injineernimada, bachelor's, mastarka, iyo barnaamijyada shahaadada takhasuska ee kiimikada, madaniga, korontada, makaanikada, iyo injineernimada softiweerka
Kulliyadda injineernimada jaamacaddu waa Kulliyada kaliya ee Injineernimada ee Kanada oo bixisa shahaadada bachelorka ee injineernimada iyo diblooma ee Dibloomada Teknolojiyada injineernimada muddo afar sano ah.
LU waxay bixisaa waxbarasho injineernimo oo ardayda siinaysa khibrad gacmeed iyo aqoon aragtiyeed oo ay u baahan yihiin loo shaqeeyayaashu.
Jaamacadda York waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Toronto, Ontario, Canada oo la aasaasay 1959.
Iskuulka Lassonde ee injineernimada wuxuu maamulaa barnaamijyada injineernimada Jaamacadda York. Waxay bixisaa shahaadooyin, shahaadada koowaad, iyo barnaamijyada qalin-jabinta ee farsamooyinka injineernimada kala duwan.
Barnaamijka shahaadada ee la bixiyay waxaa ka mid ah Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed (GIS) & Sensing Remote iyo Meteorology. Under barnaamijyada qalin-jabinta, ardaydu waxay sii wadi karaan darajooyinka soo socda:
Injineerka madaniga ah (MASc & Ph.D.)
Sayniska Kombiyuutarka (MSc & Ph.D.) & injineernimada kombiyuutarka (MASc)
Sayniska Dunida & Cirka (MSc & Ph.D.)
Injineernimada farsamada (MASc & Ph.D.)
Jaamacadda York's Lassonde School of Engineering sidoo kale waxay bixisaa barnaamijka Bergeron Ganacsadayaasha Sayniska & Teknolojiyada (BEST). Barnaamijka BEST waxaa loogu talagalay ardayda si ay ugu suurtagasho inay horumariyaan xirfadaha ganacsiga oo ay bilaabaan ganacsi bilaabaya tiknoolajiyad.
Had iyo jeer waa abaalmarin inaad ka hesho shahaadada injineernimada jaamacad bixisa waxbarasho tayo sare leh. Darajooyinka laga bixiyo hay'adahaas ayaa si weyn looga aqoonsan yahay adduunka oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, hay'adahan la aqoonsan yahay ee ABET waxay ardayda u fidiyaan xirfado ay u baahan tahay farsamada casriga ah.
Dhinaca kale, barashada injineernimada jaamacadaha Ontario waxay la timid faa iidooyin badan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka noocaas ah ayaa ah fursado shaqo oo badan oo laga heli karo Kanada. Tani waa sababta oo ah dhaqaalaha Kanada waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya dhaqaalaha adduunka.
Akhrinta maqaalkan, waxaad kaheli doontaa jaamacadaha injineernimada ugufiican Ontario ee buuxin doona baahiyahaaga.
Iskuulada Injineerinka ugu Fiican Kanada oo leh Deeqo waxbarasho
Jaamacadaha injineernimada farsamada sare ee Kanada
Jaamacadaha ugu Fiican Kanada Inay Daraasad Ku Sameeyaan Koorsooyinka Injineerinka Dhismaha | Kharashka Waxbarashada
Sida wax looga barto ugana shaqeeyo Kanada bilaa IELTS
45 Jaamacadaha ugu sareeya Kanada ee Master
Barashada Hagaha Dibadda Barashada Kanada | Gelitaan | Deeqaha waxbarasho | Khidmadaha | Deeqo iyo Deymo
Previous Post:Faa'iidooyinka Muhiimka ah ee Marti gelinta Macluumaadka Helitaanka Microsoft ee khadka tooska ah
Post Next:Qaab Sir ah oo loo qoro Qormo Waqtiga badhkiis